Wasiir Beyle: "580 Milyan oo Doolar ayaan weydiisanay Bankiga Adduunka si aan u kabno..." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wasiirka Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay lacag dhan 580 Milyan oo doolar weydiisatay Bankiga Adduunka.
Wasiirka oo maanta ka hadlayey shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku faahfaahiyey deynta ay Soomaaliya ka cafiyeen dalalka Naadiga Paris Club oo gaareysa 1.4 Bilyan Doolar, waxaana uu shaaciyey in guul weyn laga gaaray arrinta deyn cafinta.
Wasiirka Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay Bankiga Adduunka ka codsadeen lacag dhan 580 Milyan oo Doolar si wax looga qabto xaaladda Coronavirus iyo hoos u dhaca uu ku keeni karo dakhligii dalka soo geli lahaa, isagoo aan sheegin in lacagtaasi tahay deyn cusub ama deeq.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo cafis ku sii daayay Maxaabiis ku dhow 600.
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo ku dhawaaqay Baroordiiq loo sameynayo marxuum Nuur Cadde